TSY AFAKA NAMITA NY FANAVAOZANA IZAHAY. MANAFOANA NY FANOVANA NATAO TAMIN'NY SOLOSAINAO (VOAVAHA) - MALEFAKA
Tsy afaka namita ny fanavaozana izahay. Manafoana ny fanovana natao tamin'ny solosainao (voavaha)
Eny, raha mamaky ity andalana ity ianao Windows 10 solosaina - Tsy afaka namita ny fanavaozana izahay. manafoana ny fanovana natao tamin'ny solosainao , dia miatrika olana amin'ny anao ianao Windows 10 izay ahazoanao ity hafatra ity amin'ny efijery manga. Ity olana ity dia matetika mitranga raha toa ka tsy alaina araka ny tokony ho izy ny rakitra fanavaozana Windows na raha simba ny rakitra rafitrao sns. Ary amin'ny ankamaroan'ny fotoana, ny rafitra fiasan'ny Windows dia manafoana ho azy ireo fanovana ary ny mpampiasa dia afaka manomboka ny Windows tsy misy olana. . Na izany aza, amin'ny toe-javatra sasany, ny rafitra fiasan'ny Windows dia tsy mahazaka fiovana. Ary mety hifanena ianao Windows 10 mijanona Tsy nahavita ny fanavaozana izahay, Esory ny fanovana natao tamin'ny solosainao Aza vonoina ny solosainao.
Mpampiasa maromaro no mitatitra ity olana ity aorian'ny fametrahana windows update:
Windows Update dia mahita fanavaozana (KB5009543). Rehefa mandeha manidy na manomboka indray aho dia manandrana mametraka ny fanavaozana, saingy tsy mahavita mametraka izany, manome ny fahadisoana: Tsy vitantsika ny nanavao ny fanavaozana; Manafoana ny fiovana. Avy eo dia mamerina ny fanovana. Ary izany dia mitranga isaky ny manomboka ny solosaina.
Fanavaozana Windows manafoana ny fanovana natao tamin'ny solosainao
Amin'ny teny tsotra, Rehefa hitanao fa mijanona amin'ity toe-javatra ity ianao isaky ny mamerina ny solosainao ary tsy misy fiovana. Miharatsy ity olana ity rehefa tsy afaka miditra amin'ny Windows ianao ary miditra amin'ny sehatra rehetra. Ity olana ity dia azo vahana amin'ny fandefasana ny Ecran Advanced Startup ary boot Windows 10 ao amin'ny fomba azo antoka . Raha vao miditra amin'ny efijery Advanced Startup ianao dia tsy maintsy mampihatra vahaolana samihafa hamahana ny olanao. Ankoatra an'io vahaolana io dia misy vahaolana hafa maro, ny sasany amin'ireo vahaolana mahaliana dia -
Avereno ny rafitrao avy amin'ny Restore Points
Ny System Restore dia mamerina ny zava-drehetra any amin'ny toerana fanarenana voatahiry, fa ny zava-dehibe indrindra dia tsy maintsy mirakitra an-tsoratra izany ianao. Na izany aza, raha tsy misy ny teboka Famerenana amin'ny solosainao, dia tsy misy na inona na inona haverina ny System Restore. ny mamorona ny toerana famerenana , dia ho azonao atao ny mamerina ny rafitrao amin'ny toe-javatra miasa teo aloha izay tsy misy fiantraikany amin'ny rakitrao. Raha namorona teboka famerenana alohan'ny fisehoan'ity hadisoana ity ianao, dia ho mora ny hamaha ity olana ity tsy misy olana. Mba hamerenana avy hatrany ny rafitrao dia tsindrio fotsiny ny Troubleshoot amin'ny fanarahana dingana.
Satria tsy afaka miditra amin'ny windows isika dia mila Boot avy fametrahana media ,
Tsidiho ny efijery voalohany dia mifidiana ny fanamboarana ny solosainao,
Ao amin'ny menio Troubleshoot, tsindrio ny safidy Advanced.
Eo ambanin'ny menio Advanced options, tsy maintsy misafidy System Restore ianao.
Raha te handroso bebe kokoa ianao dia tsy maintsy miditra ny tenimiafinao amin'ny kaontinao mpampiasa ary manindry ny Next.
Raha efa namorona teboka famerenana ianao teo aloha dia ho hitanao eto avokoa izy rehetra. Ankehitriny, avy amin'ny lisitra, azonao atao ny misafidy ny teboka Ampodio izay mety aminao indrindra.
Hamafiso ary ny efijerin'ny solosainao dia hitondra anao hiverina any amin'ny fanjakana alohan'ny hetsika voalaza ao amin'ny saha Famaritana. Raha afa-po amin'ny safidinao ianao dia azonao atao ny manindry ny Finish ary hanomboka ny dingana famerenana amin'ny laoniny.
Ity dia a Windows Troubleshooting fanamboarana izay ampiasaina rehefa misy zavatra manakana ny Windows hanomboka. Ampiasaina koa izy io rehefa misy zavatra simba na tsy hita ny rakitra rafitra ary tsy azo atao ny manamboatra ity lesoka manga ity. Mba hampavitrika ity safidy ity dia tsy maintsy mandeha any amin'ny Advanced options ianao. Ny fomba tsotra hidirana amin'ny safidy Advanced dia ny famonoana ny solosainao amin'ny fampiasana ny bokotra herinaratra in-telo misesy. Midika izany fa tsy maintsy mamelona ny solosainao ianao ary rehefa mandeha izany dia vonoy amin'ny fampiasana ny bokotra herinaratra. Avereno in-telo misesy ireo dingana ireo ary ny Windows dia tokony hanokatra ho azy ny efijery Advanced Startup (Automatic Repair) ho anao.
Raha vao misokatra ny Window Advanced Repair, dia azonao atao ny manindry ny safidy Startup Repair. Ity safidy ity dia hamantatra ho azy ny anton'ny olan'ny PC-nao ary hamaha ny olanao. Ity safidy ity dia afaka mamaha ny ankamaroan'ny olana izay manakana ny windows manomboka amin'ny fomba mahazatra ity Windows update loop ity izay tsy vitanay ny nanavao ny fanavaozana manafoana ny fanovana.
Ampiasao ny DISM restorehealth
Deployment Image Servising and Management aka DISM dia azo ampiasaina hanamboarana ity olana ity sy hanomanana sary Windows. Mba hampavitrika ny scan DSIM amin'ny rafitry ny solosainao dia mila manokatra ny Command Prompt aloha ianao. Mba hanokafana ny Command Prompt dia mila manokatra indray ny safidy Advanced Startup ianao ary mandehana any amin'ny menio araka ny voalaza etsy ambony ary safidio ny Command Prompt. Ao amin'ny pejy Command Prompt, tsy maintsy manoratra ity baiko manaraka ity ianao - DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth ary atsangano indray ny solosainao mba hijerena raha nanamboatra ny olan'ny efijery manga ny DSIM na tsia.
Fafao ny lahatahiry Distribution Software
Ny lahatahiry Distribution Software dia lahatahiry vonjimaika hita ao amin'ny Windows mba hitahiry ireo rakitra fanavaozana mandra-pahatonga azy ireo tsy alaina tanteraka amin'ny rafitra. Raha misy olana amin'ny efijery manga, amin'ny fanesorana ny lahatahiry Distribution Software, dia mety ho azonao atao ny manamboatra ilay lesoka. Mba hamafa ny lahatahiry dia mila boot ny Windows 10 amin'ny Safe Mode . Mba hanaovana izany dia mila manokatra indray ny safidy Advanced Startup ianao ary mandehana any amin'ny menio ary tsindrio ny Startup Settings.
Ao amin'ny safidy Startup's Settings, mila manindry bebe kokoa amin'ny Restart ianao. Raha vao manomboka indray ny rafitrao dia afaka misafidy fomba hanombohana ny Windows ianao. Hahita lisitry ny safidy fanombohana Windows eo amin'ny efijery ianao. Mba hisafidianana ny fomba dia azonao atao ny manindry ny fanalahidin'ny isa eo amin'ny fitendry anao na azonao ampiasaina ny fanalahidin'ny fiasa toy ny F1, F2, sns., Azonao atao ny manindry F5 na 5 ihany mba ahafahana manao Safe Mode amin'ny tambajotra.
Ankehitriny, mba hanesorana ny lahatahiry dia mila manakana serivisy roa amin'ny solosainao ianao amin'ny fampiasana baiko vitsivitsy. Azonao atao ny manoratra ny baikon'ny baiko ary tsindrio havanana mba hisafidianana ny safidy Run as Administrator. Soraty aloha ny baiko net stop wuauserv ary soraty ny bits net stop. Ankehitriny, tsy maintsy mandeha amin'ity toerana ity fotsiny ianao - C:WindowsSoftwareDistribution ary Mifidiana votoaty ary amin'ny fanindriana ny bokotra havanana amin'ny tap eo amin'ny safidy Delete avy amin'ny submenu. Ary, hamaha ny olanao izany aorian'ny famerenana indray.
Fanamarihana: Azonao atao koa ny manova anarana ny SoftwareDistribution toy ny SoftwareDistribution bak
Ary aza manahy ny amin'ny famafana ity SoftwareDistribution lahatahiry toy ny windows dia mamorona vaovao ho azy rehefa mijery ny fanavaozam-baovao Windows ianao amin'ny manaraka mba hisintonana rakitra fanavaozana vaovao avy amin'ny mpizara Microsoft.
Eny ary, toro-hevitra haingana vitsivitsy hamahana azy ireo Tsy afaka namita ny fanavaozana izahay. manafoana ny fanovana natao tamin'ny solosainao fahadisoana amin'ny efijery manga. Afaka manandrana an-kalalahana ny iray amin'ireo fomba ianao ary raha tsy misy miasa aminao dia reset ny PC no ho safidy farany ho anao. Saingy, manantena izahay fa tsy mila manao izany ianao.
Fomba 5 hanamboarana Windows tsy afaka mifoha amin'ny olana amin'ny torimaso
tsy mandeha ny laptop na dia ampidirina aza? Andramo ireto vahaolana ireto
Amboary ny kofehy mipetaka amin'ny mpamily fitaovana BSOD ao Windows 10
Fix Bootmgr tsy ampy Tsindrio Ctrl+Alt+Del raha hanomboka indray Windows 10, 8, 7
Tsy nampoizina ve ny solosaina Windows 10? Ampiharo ireto vahaolana ireto
Ahitsio APC_INDEX_MISMATCH Stop code 0x00000001 amin'ny Windows 10